अब मोटरसाइकलको कर २७ सय देखि १५ हजार सम्म पुग्ने, हेर्नुस् तपाईको वाईकको कति ?
काठमाडौं, ४ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुईपाङ्ग्रे सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) मा प्रदूषण कर लगाउने भएको छ । वार्षिक २ सय रुपैयाँ प्रदूषण कर लिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कर नयाँ दर्ता...
कसले किन्छ विश्वमा सबैभन्दा बढी हतियार ?
काठमाडौं, २९ फागुन । विश्वमा अझै हतियारको मोह हराएको छैन । कुनै पनि बेला युद्ध हुन्छ भन्दै सुरक्षाका लागि हतियार किन्ने मुलुकहरु घटेका छैनन् । हतियार किन्ने माममाला छिमेकी भारत सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । यो...
बार्सिलोना, १४ फागुन । सामसुङले एस ९ र एस ९ प्लस स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । स्मार्ट फोनको विश्वबजारमा अग्रणी स्थान ओगटेको दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङले स्पेनको बार्सिलोनामा आयोजित ‘प्रि–मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेस २०१८’ मा दुवै...
अफरोडमा सजिलै कुदाउन सकिने दश मोटरसाइकल
काठमाडौं, १५ फागुन । धेरैलाई पहाडको बाटोमा मोटरसाइकल राइडिङ गर्ने शोख हुन्छ । त्यसका लागि उपयुक्त मोटरसाइकलको खाँचो पर्छ । सबै खाले मोटरसाइकल त्यस्ता बाटोमा कुदाउँन असहज हुन्छ । यहाँ पहाडको जोखिमपूर्ण सडकमा यात्रा गर्न...
भोजपुरका विभिन्न विद्यालयलाई पुर्व अर्थ मन्त्री कोइरालाले गरे ३० थान कम्प्युटर वितरण
अर्जुन बस्नेत भोजपुर, १० फागुन । भोजपुरका विभिन्न विद्यालयलाई पुर्व अर्थ मन्त्रि शंकरप्रसाद कोइरालाले ३० थान कम्प्यूटर वितरण गरेका छन् । कोइरालाले भोजपुरका तीन वटा विद्यालयलाई ३० थान कम्प्यूटर वितरण गरेका हुन् । भोजपुर सदरमुकाममा रहेको विद्योदय...
भाग्य छ भने तपाईले फेसबुकको यो पोष्ट शेयर – गरेबापत ४.५ मिलियन डलर पाउने
काठमाडौं, फेसबुकका सिईओ मार्क जुकेरबर्गले आफ्नो छोरीको जन्मपश्चात फेसबुक प्रयोगकर्तालाई ‘फेसबुक’ विश्वकै शक्तिशाली सञ्चार माध्यम बनेको भन्दै प्रयोगकर्तालाई धन्यवाद दिएको आफ्नो पोष्ट शेयर गरेबापत भाग्यशाली हजार जनालाई लाखौँ डलर दिने विषय अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा...